Ajụjụ - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
Kedu ihe kpatara ezigbo njikwa njikwa uru nke ZR-1000 nje nyocha na-arụ ọrụ anaghị agbaso usoro achọrọ achọrọ (2200 ± 500 CFU)?
(1) Bacteria nkwusioru anaghị izute chọrọ nke mba ọkọlọtọ.
(2) Ọgba mmiri nke mgbapụta peristaltic adịghị mma, gbalịa ịbawanye ma ọ bụ belata ọnụego mmiri.
(3) Lelee ụdị nri petri (Karịsịa efere iko).
Kedu ihe kpatara nje ndị ọzọ na-eto eto mgbe nnwale nke ZR-1000 Bacteria filtration arụmọrụ na-enyocha?
） 1） pipeline na-agba agba, lelee ma silik na-ejikọ ọkpọkọ na iko na-agbapụ.
） 2） Gburugburu ebe ahụ adịghị asọ oyi mgbe ha na-akwado usoro ọdịbendị.
3） Ebe ọrụ siri ike ma ọ bụ na HEPA nyo ada.
4） Lelee nha nke nri petri (Karịsịa nri efere).
Otu esi edozi nsogbu nke ZR-1000 nje nyocha filtration arụmọrụ (BFE) enweghị ike ibudata.
（1,） Mgbe ịpị bọtịnụ ike, ọkụ ọkụ na-acha ọbara ọbara anaghị arụ ọrụ, oriọna na ọkụ UV anaghị arụ ọrụ, lelee ma ejikọrọ ike ọkụ ma enwere ike ọkọnọ, ma lelee ma ọkụ ọkụ mkpuchi ọkụ na azụ eji agbanwu ihe.
） 2） Ike na-egosi ìhè dị, oriọna na ọkụ UV na-arụkwa ọrụ mana ihuenyo dị oji ma igwe enweghị ike ịbido elu, kwụpụ ike ọkọnọ, bulie elu ọzọ wee pịa bọtịnụ nrụpụta na ngalaba n'ihu.
Nsogbu nsogbu nke A, B ụzọ abụọ Anderson sampler na ZR-1000 nyocha nyocha nke nje (BFE). Ihe nlere nke uzo A na B uzo abuo di iche.
） 1） Nyochaa ma etu ọnụego A na B si agbanwe agbanwe.
） 2） Lelee ma paịpụ mmiri na-agbapụ, ma chọpụta ma ọ̀tụ̀tụ̀ petri hà hà kwesịrị ekwesị (karịchaa efere nri petri ahụ, ma ọ bụrụ na efere petri ahụ dị elu nke ukwuu, ọ ga-agbago elu nke elu, nke ga-eme ka Anderson sampler ihihi).
（3） Lelee ma apertures nke ọ bụla Anderson Sample na-egbochi (usoro nnwale dị mfe, nyocha anya, ma ọ bụrụ na egbochiri ya, hichaa ya tupu ule).
Kedu otu esi emeso ntụgharị nke arụmọrụ nhicha nke ihe ZR-1006 nkpuchi ihe nhicha nke oma na ihe nyocha nke ikuku?
A na-atụ aro ka ị jiri ihe nlele ọkọlọtọ (dị ka ihe nlele nke ụlọ ọrụ nwere ikike) ma ọ bụ nyocha nyocha oge niile na usoro nyocha nyocha nke aerosol maka nyocha. Ọ bụrụ n ’enyo enyo na-enyo enyo, a na-atụ aro ya ka ị gaa ụlọ ọrụ nha ruru eru maka mmezi. Ngwaọrụ a chọrọ mmezi ma oge ịgba ọsọ, dị ka mmezi ụgbọ ala. Akụkụ nke mmezi bụ hichaa pipelines niile na nke mpụga, dochie ihe nzacha, ihe nzacha, ma hichaa generator, wdg.
Ihe nyocha nkpuchi ZR-1006 na-arụ ọrụ nyocha na nnwale ikuku na-enweghị ike ịgụta oge ma na-agba ọsọ mgbe mmalite nlele.
Nke mbu, lelee ma ntinye ihe omumu ruru ka o tinye uru (dika 85 L / min), akụrụngwa agaghị amalite nlele tupu mmiri ahụ eruo ịtọ uru (ọ bụghị oke ma ọ bụ obere). Imirikiti n'ime ha nwere ike idozi ha mgbe ha dochiri anya akwa nhicha nke modul ọkụ. Lelee ma a na-egbochi pipeline, na valvụ kpochapu nke ụlọ a na-agwakọta kwesịrị imeghe.
Ọ bụrụ na mgbago elu na ala anaghị eru 1.0 L / min, ekwesịrị dochie HEPA nyo nke photometer modul. A na-ekpekarị ikpe site na ịlele uru nrụgide iji chọpụta ma ọ ga-edochi ma jigide ya (oke nrụgide: nrụtụ nlele> 5KPa, mgbago na mgbada mgbada> 8Kpa).
Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na mgbago elu ikuku nke ZR-1006 nkpuchi ihe nhicha nke ikuku na nnwale ikuku na-enweghị ike iru uru?
O yikarịrị ka ọ bụ n'ihi na akụrụngwa chọrọ nhicha na ndozi. Enwere ike idozi nsogbu a site na ihicha oghere nke ikuku aerosol, pipeline, ụlọ agwakọta, fan, na modul photometer.
Mgbe ahụ lelee ma nnu nnu ọ dị mma, ma valvụ na-ekpocha ọkụ na azụ azụ iko karama na nnu aerosol generator na-emechi. Na lelee ma nrụgide niile ọ bụ nkịtị (Nnu bụ 0,24 MPa, mmanụ dị 0.05-0.5 MPa).
Enwere ike ịnwale oge nnwale nke ihe nyocha nkpuchi ZR-1201 mkpụmkpụ?
Kpụrụ ahụ ekwughị oge ule. A ga-eme ya mgbe ngwa ọrụ ahụ kwụsiri ike (n'ime ihe dịka 15 sekọnd). A na-atụ aro ka oge mmụba karịa 15 sekọnd.
Etu esi emeso ndiiche nke ihe nyocha nke ihe nkpuchi ZR-1201?
N'iji ya tụnyere, a na-atụ aro ka ị jiri ihe nlele dị iche iche (dị ka ihe atụ nke nzukọ ikike). Mgbe ị na-eme ntụnyere, a ga-anwale otu ihe ahụ n'otu ebe ahụ ka a ga-emetọ ihe nlele ahụ n'otu ụzọ ahụ. Ọ bụrụ n ’ị na-enyo enyo na enwere mperi na ngwa ahụ, a na-atụ aro ka ị gaa n’ụlọ ọrụ nha ruru eru maka mmezi.